Rimwe rematambudziko nekuva nechikwata chakabuditswa kunze kana chekumahombekombe chiri kungoedza kuteedzera nekuisa pamberi basa rako. Ini ndinoshanda ndisine isingasviki matatu zviwanikwa zvekunze, imwe yacho kumahombekombe. Zvinoita sekunge iwe paunopatsanura zuva rebasa pakati penzvimbo dzenguva, iwe unowanza kuunza kunonoka kune zvese zvaunoita. Ndakawana muchina wekudhindisa pandakabvisa Basecamp gore rapfuura. Izvo zvinosetsa ndezvekuti, pandakasaina neangu nyowani